အတည်ပြုပြီးနှင့်ကောလာဟလသတင်းများအတွက်ထုတ် LEGO အစုံ Marvelဘာလဲ ... နောက်တွဲယာဉ်
09 / 07 / 2021 09 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 451 Views စာ0မှတ်ချက် 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Captain America, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Marvel, Peggy ကို Carter, ပင့်ကူအဓိပတိ, စတိဗ်ရော်ဂျာ, Thanos, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်နောက်တွဲယာဉ် Marvelဘာလဲ ... ? အတည်ပြုပြီးကောကောလာဟလတွေအတွက်ပါအရင်းအမြစ်တွေကိုအနီးကပ်ကြည့်ရှုနေပြီ Lego အစုံနှင့် minifigures ။
ကာတွန်းဇာတ်လမ်းတွဲ - အက်ပ်art အတွက်ဖြစ်နိုင်သောအခြားကးစူးစမ်းဖို့အဖြစ်မှန် Marvel multiverse တွင်အဓိကပါဝင်သည်။ ဒီဇာတ်ကောင်တကယ်ဇာတ်ကောင်ဖြစ်နေလျှင်ကော။ - ပွဲ ဦး ထွက် Disneyအနည်းဆုံးနှစ်ခုလည်စည်း -in ကိုစတင်ပြီးနောက် 11 ရက်, သြဂုတ်လ 10 ရက်နေ့တွင် + Lego အစုံ, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper နှင့် 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man.
Peggy C ၏အလွန်ကောင်းသောမြင်ကွင်းနှင့်အတူartCaptain America ၏ဖိနပ်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်း (Captain C ၏ဝတ်လုံကိုယူခြင်း)arter) ဤနောက်တွဲယာဉ်သည်စတိဗ်ရော်ဂျာစ်မှမောင်းနှင်သော Hulkbuster ပုံစံစက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပထမ ဦး ဆုံးကြည့်ရှုစေသည် 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper.
ဒီနောက်တွဲယာဉ်ကဒီနှစ်စွပ်စွဲချက်မှာပါ ၀ င်တဲ့ဇာတ်ကောင်တချို့ကိုပထမ ဦး ဆုံးမြင်တွေ့ရပါတယ် Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား စီးရီး။ The နောက်ဆုံးပေါ်ကောလာဟလများလိုင်း -Up Captain C ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များပါဝင်သည်arter Tombal Captain America, T'Challa သည် Star Lord၊ Spider Supreme နှင့် Warlord Gamora (Thanos ၏သံချပ်အင်္ကျီပါဝင်သည်) ဖြစ်သည်။
အဲဒီဇာတ်ကောင်တွေအားလုံးကိုနောက်တွဲထဲမှာပုံစံတစ်မျိုးမျိုးနဲ့တွေ့နိုင်တယ်၊ သူတို့ကသူတို့ရဲ့အသေးစားဓာတ်ပုံတွေကနေဘာမျှော်လင့်ရမလဲဆိုတာကိုပိုကောင်းတဲ့စိတ်ကူးတစ်ခုပေးတယ်။ အဘယ်အရာကိုမျှယခုအချိန်တွင်အတည်ပြုပေမယ့်အဘယျသို့လျှင် ... ? တစ်လကျော်ကြာရင်ငါတို့မကြာခင်သေချာပေါက်ရှာတွေ့နိုင်လိမ့်မယ်။
← ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: အခိုးအငွေ့၌နဂါး
Lego ကောလာဟလ Marvel Collectible Minifigures လိုင်း -up, ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည် →